Nahatratra 121 ny mpitandrina, 33 ny talen-tsekoly avy amin’ny synodam-paritany FJKM Antananarivo Andrefana nanatrika ny fiofanana nomen’ny Cnaps mikasika ny fiahiana ara-tsosialy, andiany fahafolo. Nilaza i Andriamanalina Marco, isan’ireo mpampiofana fa mitovy lenta amin’ny mpiasan’ny tsy miankina rehetra, ny mpiasan’Andriamanitra, ka mila fiahiana ara-tsosialy sahaza. Nampahafantarina ny lalàna mifehy ny asa, ny zon’ny mpiasa, ny fanampiana omen’ny Cnaps. Aorian’ny fiofanana, hidina ifotony hanara-maso ny Cnaps, hanampy hamaha ny olana satria tanjona ny hampitomboana ny isan’ny mpiasa ho mpikambana ao anatiny.
Notanisain’ny filohan’ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana, ny mpitandrina Rakotozanany Andrianirinomena Jules, ny olana mpahazo ny mpitandrina, toy ny areti-maso, ny tosidrà, ny aretim-bavony, sns.
Hamatsy vola 45 tapitrisa dolara ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad) hanarenana ny toekarena eto Madagasikara. Vola fanomezana tsy averina ny 14 tapitrisa dolara amin’io, ary ampindramina ny 31 tapitrisa dolara, ao anatin’ilay fandaharanasa tantsoroka hisian’ny fifaninanana eo amin’ny lafiny toekarena, andiany voalohany (PACE I) ho an’i Madagasikara.
Tanjona ny hisarihana ny mpampiasa vola vahiny (IDE) tsy miankina na avy amin’ny fanjakana bebe kokoa, hiteraka asa amin’ny lafiny fanodinam-bokatra indostrialy, sady hanatsarana ny vokatry ny orinasam-panjakana malagasy. Anisan’izany ny Jirama sy ny Air Madagascar, mba hampihenana ny fanampiana ara-bola azy ireo ary ahafahana manodina izany vola izany ho any amin’ny fampiasam-bola amin’ny sehatra hafa mitondra fampandrosoana.